En vente actuellement 19/11/2018
Archive du 19/11/2018
Izaho tompoko dia maty vonon’ny vadiko.
3 taona nivadiana izahay, fa tamin’ny herintaona voalohany ihany no tsy nikasihany tanana ahy.
Nahoana no mankarary kibo ny voankazo sasany?
Tsy ilaozan’ny mety hankarary ny voankazo, raha toa ka tsy ara-dalàna ny fanasàna azy, ny fihinanana azy, na koa ny fahamasahany. . Ireto ny antony mety hahatonga azy hankarary kibo.
Ireo mpilalao sarimihetsika nalaza, saingy niova asa
Efa betsaka ireo mpilalao sarimihetsika no nifidy lalan-kafa tamin’ ny filalaovana sarimihetsika, noho ny antony maro samy hafa. Nanana ny lazany tokoa ireto entina aminao ireto, tamin’ny fotoana nilalaovany saingy nanapa-kevitra ny hanao asa hafa mihitsy taty aoriana
Malahelo ny olon-tiana, orohy ny akanjony !
Mitahiry fahatsiarovana ny zavatra hitan’ny maso, toy ny sary, sy ny feo renesin’ny sofina, saingy ny tena fahatsiarovana sarotra fafana indrindra dia izay tsapan’ny orona. Tsy misy mamoha fahatsiarovana tahaka ny fofona !
Shopping « robe »
1. Robe à dentelle. 50.000Ar – Galerie Mialy Behoririka 2e étage Box2 2. Robe ceinturée : 50.000Ar – Galerie Mialy Behoririka 2e étage Box 2
Ranom-boasary : manakatona mason-koditra eo noho eo !
Mitondra vokatsoa maro ho an'ny hoditra ny voasary. Telo raha kely indrindra ny vokatra azo eo noho eo raha hikarakarana tarehy ity voankazo ity : manala ireo sela maty amin'ny hodi-tava ny voasary, manadio ny tarehy hatrany ifotony koa ka tsara hanaovana "gommage", ary ny fahatelo dia mampikatona eo noho eo ny mason-koditra misokasoka no sady mandrindra ny menaka sy tavo mipoitra eo amin'ny tarehy.
Tsy mbola nikitika solosaina mihitsy ny minisitry ny « cybersécurité » ao Japana
Namboraka ny minisitry ny « cybersécurité » ao Japana, Yoshitaka Sakurada, fa mbola tsy nikitika solosaina mihitsy.
Renim-pianakaviana nandoro zanaka, hogadraina 40 taona
Niakatra fitsarana tao Etazonia ary voaheloka higadra 40 taona an-tranomaizina, ny renim-pianakaviana iray.
Ho azo tiliana amin’ny alalan’ny rà ny homamiadana vao miantomboka
Mpikaroka maromaro avy ao amin’ny University Health Network ao Canada no nandrafitra fomba fitiliana homamiadana amin’ny alalan’ny rà.
Matahotra hiroso amin’ny fanambadiana izy, fa nahoana ?
Ny fahatahorana hiroso amin’ny fanambadiana dia antsoina hoe “gamophobie”. Dingana isan’ny lehibe indrindra eo amin’ny fiainana tokoa mantsy ny fanambadiana. Nofinofin’ny ankamaroan’ny vehivavy izany hatao mariazy izany.Dingana fotsiny ihany anefa izany fa ny fiainana ao aorian’izay no tena atao hoe fanambadiana ka tsy vitsy ireo izay tratran’ny “gamophobie
Raha vao miresaka lamaody, dia heverina fa haitraitram-behivavy izany. Tsy ny vehivavy rehetra koa, fa ireo izay sokajiana ho tsy dia manan-tsaina firy, tia rendrarendra, matimatin’ny endrika ivelany, fonony fotsiny fa tsy misy fanahy !